မဏိမေခလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မဏိမေခလာ သည် ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရှိ စာပေများ၌ပါသော ဒဏ္ဍာရီလာ နတ်သမီး ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာစောင့်နတ်သမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြရာ အချို့က အိန္ဒိယပင်လယ်တဝိုက်ကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယူဆပြီး အချို့မှာ တောင်တရုပ်ပင်လယ်ကို ကြည့်ရှူကြောင်း ယုံကြည်သည်။ နတ်မင်းကြီး ၄ ပါးမှ ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည့် နတ်သမီးဖြစ်ပြီး သင်္ဘောပျက်ပါက ကယ်ဆယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။  ဗုဒ္ဓဝင်တို့၌ ပါဝင်ပြီး မဟာနိပါတ်ရှိ မဟာဇနကဇာတ်ကြောင့် ထင်ရှားသည်။ ယင်းတွင် သင်္ဘောပျက်ရာတွင်ပါသော မဟာဇနကသတို့သားကို ကယ်၏။ 
မြခါးရန်းကြိုး၊ သို့မဟုတ် စိမ်းလဲ့သော အဆင်းရှိသည့် မြရတနာတို့ဖြင့် စီခြယ်ထားသော ခါးကြိုးတန်ဆာရှိသည့် သမုဒ္ဒရာစောင့် နတ်သမီးဖြစ်သည်။ မဏိမေခလာ နတ်သမီးသည် ကျွန်းကြီး လေးကျွန်း ပြင်ဘက်၊ သမုဒ္ဒရာရေအယဉ်၌၊ အတွင်းကားငွေ၊ အပကား ရွှေအတိပြီးသော၊ ယူဇနာ ၁၅ဝ အပြောအကျယ် ပဉ္စင်တူရိယာ ကချေသဘင်နှင့် ပျော်ရွှင်၍ နတ်သားနတ်သမီး ရှစ်သောင်းခြံရံလျက် စံစားကာနေ၏။ မိဘကို ရိုအသေလုပ်ကျွေးခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အား ချစ်ခင်သနားခြင်း၊ အလှူပေးခြင်း၊ သီလဆောက်တည်ခြင်း စသော ဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော ယောက်ျားမြတ်တို့ကို မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ နစ်မွန်း ခဲ့သည်ရှိသော် ဆယ်တင်စိမ့်သောငှါ စတုလောက ပါလနတ်ကြီးလေးယောက်တို့က မဏိမေခလာ နတ်သမီးအား သမုဒ္ဒရာ၌ အသီးအသီး အစောင့်ထားကြသည်။
မြန်မာပညာရှိ အမတ်ကြီး မဟာစည်သူ ရေးသားဖွဲ့ဆိုအပ်သော မဟာဇနကပျိုးတွင် -
--- နတ်ပြည် ပထမ၊ အစိုးရသား၊ လောကပါလော်၊ နတ်လေးဖော်တို့၊ ထိုရော်အခါ၊ မဟာသမုဒ္ဒ၊ ပင်လယ်ဝ၌၊ မိဖလုပ်ကျွေး၊ မွေးပေသသူ၊ လူဖြင်အရှိ၊ ဘေးမထိအောင်၊ စောင်စောင်မ္မ နေ့ညမြင်သိ၊ ကြည့်ရှုဘိဟု၊ မဏိမေခလာ၊ နတ်လိမ္မာကို၊ အရာကိုယ်စား၊ အစောင့်ထား၏။ --- ဟု မဏိမေခလာအကြောင်း ဖော်ပြပါရှိလေသည်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား အလောင်းဖြစ်သော မဟာဇနကမင်းသည် ခုနစ်ရာသော သင်္ဘောသားတို့နှင့်တကွ သမုဒ္ဒရာအတွင်း သင်္ဘောလွှင့်သွားရာ လေအဟုန် ပြင်းထန်သဖြင့် မခံနိုင်သောကြောင့် သင်္ဘောနစ်မြုပ်ခဲ့၏။ ခုနစ် ရက်မြောက်သောနေ့မှ မဏိမေခလာ နတ်သမီးလာ၍ ဘုရားလောင်းအား ကယ်တင်သည်။ နတ်သမီးသည် ဘုရား လောင်းအား သမုဒ္ဒရာထဲမှ ချီပိုက်၍ မိထိလာပြည်၊ သရက်ဥယျာဉ် မင်္ဂလာ ကျောက်ဖျာအပြင်၌ သိပ်ထားကြောင်း မဟာဇနက ဇာတ်တော်တွင် ဆိုသည်။
↑ G.P. Malalasekera. "Dictionary of Pali Proper Names: Pali-English". Asian Educational Services, 2003
↑ Anne Elizabeth Monius. "Imaginingaplace for Buddhism: literary culture and religious community in Tamil-speaking South India". Oxford University Press US, 2001, pages 111-112
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဏိမေခလာ&oldid=690381" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။